စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ - ဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်လည်အပတ်ကအားလုံး slot နှစ်ခု - 10% £ 100 အထိတက် |
စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ – ဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်လည်အပတ်ကအားလုံး slot နှစ်ခု - 10% £ 100 အထိတက်
ဒီမြှင့်တင်ရေး 19 အကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် – 25ဇန်နဝါရီလကြိမ်မြောက် 2017 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ACST ၏ညီမျှသည် -9.30hrs, ဒီနည်းကို -1hr, PTZ + 8နာရီ.
အမြတ်နှင့်အရှုံးသာ (: P&L ကို) ထိုမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းလှုပ်ရှားမှုပြန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အရည်အချင်းဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်.
ဆုံးရှုံးမှု Back ကိုပိုက်ကွန်ကိုဆုံးရှုံးမှုသည်နှင့်အညီချီးမြှင့်ကြလိမ့်မည် (စစ်မှန်သောပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမှု) အားလုံး slot ကဂိမ်းအပေါ်.
ကစားသမားသင့်ရဲ့ပိုက်ကွန်ကို P ကိုက qualify.In ထိုအဖြစ်အပျက်မှမြှင့်တင်ရေးကာလအတွက်£ 10 ငွေရ&L ကိုဆုံးရှုံးမှုအတွက်£ 10 ကျော်ရရှိခဲ့သည်, သငျသညျမှာတွက်ချက်တစ်ဦးထပ်တိုးဦးမည် 10% £ 100 အမြင့်ဆုံးအထိကို slot ကဂိမ်းပေါ်တွင်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများ.
ဒီမြှင့်တင်ရေးထံမှရရှိခဲ့ပြီးအပိုဆုရန်ပုံငွေများ, ဆုကြေးငွေချိန်ခွင်၏အာမခံလိုအပ်ချက်များ၏လျှော့ချရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါဘူး Blackjack နှင့်ကစားတဲ့ပေါ်မှာငါတို့ slot က games.Wagers ပေါ်မှာကစားရန်သာအသုံးပွုနိုငျ.